I-China i-1.6m inyibilikisiwe umatshini wokwenza ilaphu umatshini kunye nabathengisi | Hongli
* Igcwele ngokuzenzekelayo ukusuka ekutyeni ngezinto ezibonakalayo ukuya ekunyibilikeni kwelaphu lokugqibela lokuqengqa, itekhnoloji evuthiweyo, ukuqhuba okuzinzileyo, iPFE inokufikelela kuma-95 nangaphezulu.
* Umthamo wokuvelisa ukusuka kwi-1500kg, owona mveliso ngqo uxhomekeka kumatshini ongezelelweyo kwaye unyibilikisiwe ubungakanani bokubumba.
5.Ububanzi beProduct: 1600MM
6.Ukusebenza kwemveliso: 1500KG / 24Iiyure
7.Umiselwe uMax. Isantya: 15M / Minute
Amandla eTotal: 600KW
Ubungakanani beMachine (LXWXH): 14X5.5X4.5M
1.90 Isikrelem soDonga olunye: 1set
3.Air Isixhobo sangaphambi kobushushu
I-6.Nettsha ngeHydraulic Double Pillow engasimiyo uhlobo
7.Electrostatic Isixhobo se-Electret
I-9.Roots blower kunye nenkqubo yokutsala abalandeli
I-10.Automatic Slitting kunye nokubuyisa isixhobo
11.Siemens Inkqubo yokulawula i-PLC.
Amacandelo e-Free Sphere: Amanye amacandelo aManzi afana nesixhumi
* Igcwele ngokuzenzekelayo ukusuka ekutyeni okwenziwe ngezinto ukuya kwisinyibilikisi sokugqibela sendlela yokuqengqeleka, itekhnoloji evuthiweyo, ukuqhuba okuzinzileyo, iPFE inokufikelela kwi-9.5 nangaphezulu.
* Umthamo wemveliso ovela I-150I-0kg, ubungakanani ngqo bokuvelisa buxhomekeke kumatshini ongezelelweyo kwaye unyibilike ubungakanani bokubumba.
1. Imodeli: HL-1600
2. Uhlobo lweMveliso: Ukugquma okuBileyo kuya ezantsi
3. I-Voltage: I-380V / 3P / 50Hz
4. Izixhobo ezisetyenzisiweyo: PP
5. Ububanzi beemveliso: 1600MM
6. Ukuvelisa amandla: I-1500KG / iiyure ezingama-24
7. Uyile uMax. Isantya: 15M / Minute
8. Amandla onke: I-600KW
9. Ubungakanani boomatshini (LXWXH): 14X5.5X4.5M
1. I-90 Screw eyodwa yokukhupha: 1set
2. Vperum Hopper: 1set
3. Isixhobo sangaphambi kobushushu boMoya
4. Impompo yokuhambisa
5. I-1860MM Spinneret
6. Ishaja yeNet nge Hydraulic Double Pillow Uhlobo olungayekiyo
7. Isixhobo se-Electrostatic Electret
8. I-Servo engafuni kunye nokusika isixhobo
9. Iingcambu blower kunye nenkqubo yokutsala abalandeli
10. Ukuhamba ngokuzenzekelayo kunye nokubuyela umva Isixhobo
11. Inkqubo yokulawula ye-Nokia PLC.
1. Ukufakwa kweVidiyo yokuNika inkxaso, kunye nonxibelelwano lwevidiyo bukhoma kwimeko yohlengahlengiso inengxaki encinci.
2. Iindawo zaSimahla zeeNxalenye: Amanye amacandelo aManzi njenge isinxibelelanisi, isitya sokufudumeza, njl.
3. Isiqinisekiso Somatshini Bonke: unyaka omnye